မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် အဖြစ် လိင်တူချစ်သူ အမျိုးသား နှစ်ဦး၏ မင်္ဂလာသက် (၁၀) နှစ်ပြည့် အခမ်းအနားကို မတ်လ ၂ ရက်၊ ညနေ ၆...နာရီ အချိန်တွင် ဗဟန်းမြို့နယ် အတွင်းရှိ Excel Treasure Hotel တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး နှစ်ယောက်တို့ လက်ထပ်ခြင်းသည် ဘဝနှစ်ခု ပေါင်းစပ်သည့် သာမန်မင်္ဂလာ အခမ်းအနား ဖြစ်သည့်အတွက် မည်သည့် အရာကိုမျှ ဂရုစိုက်စရာ မလိုကြောင်း၊ အမျိုးသားနှစ်ဦး အတူနေ ပေါင်းသင်းကြသည့် နောက်ပိုင်းတွင်မူ ၎င်းတို့၏ ဘဝတွင် တခြားသူများ၏ အာရုံစူးစိုက် ခံရမှုများ၊ စောင့်ကြည့်မေးငေါ့ ပြောဆိုမှုများကို ကြုံတွေ့ကြရကြောင်း၊ လိင်တူချင်း ချစ်ခြင်းသည် အမှားအယွင်း တစ်ခု မဟုတ်ကြောင်းကို ပြသရန် အတွက် ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်း၏ အားပေးမှုများ လိုအပ်ကြောင်း Equality Myanmar မှ တာဝန်ရှိသူ ဦးအောင်မျိုးမင်းက ပြောကြားသည်။(The Voice)
Posted by linnzawhtike at 3/02/20140comments
ကင်မရာခလုတ်ကို နှိပ်ချဖို့ မမေ့နဲ့
‘ဒိုင်း’ ကနဲ မိုးပေါ်ပျံတက်
‘ဒိုင်း’ ကနဲ ချောက်ထဲပြုတ်ကျ
တညလုံး မအိပ်ခဲ့ရတဲ့ ညကြီးပါကွယ်။
နွားကို ငေါက်မယ့် ကိုယ့်အသံကိုယ်တောင်
သည်မှာ မေ့ကျန်မယ့်ကောင်ပါကွယ် ...။
ငါ့ ခပ်မျှဉ်းမျှဉ်း အသက်ရှူသံလေးကအစ
သူများ မိန်းကလေးတွေ မတတ်စွမ်းဘူး
တညလုံး မအိပ်ခဲ့ရတဲ့ ညကြီးက
ပခုံးသားကို လှိုင်းကြက်ခွပ်တွေ တွန့်သလို
တက်သစ်စ ကျွန်းကလေးလို အုံ့ဆိုင်းဝေဆာ
တလုံးချင်း ခုတ်မောင်းနေတယ် ...
ငါ ထမ်းရ ထမ်းရပါကွယ်
ပင်နယ်ဆလင် အလုံးတရာ ထိုးထားသလို
အကျင့်မရှိဘဲ ဝိတ်မပြီး နောက်တနေ့
သူ့အသီးက အလွန်ကို ထွားပါတယ်
သူကလေး လာနေပြီ ...။
ငါဟာ ကောင်းဘွိုင်လို မြင်းစီးသမားဖြစ်
ငါ့ရင်အုံ ငါ ပြန်တီးမိ
သင်းကလေး လာနေပြီ ...။
လာနေပြီ ... ...။
သင်းကလေး ပေါင်သားပေါ်အိလို့ ...။
သည်ကမ္ဘာကြီးကို တဒီးဒီး လည်စေခဲ့တာ
မို့မောက်ပြီး ခုံးခုံးကလေး ကျန်ရစ်ခဲ့
ထွန်းသစ်စ သောင်ခုံမို့မို့လို ရင်သား
ပျက်ပျက်ကျရာ လွင်ပြင် ...။
ပျက်ကျရ လေယာဉ်တစီးပေါ့ ...။
လှမ်းလျှောက်လို့ လာနေခဲ့ပြီ ...။
ငါ့အသည်း ပလုတ်တုတ်ဖြစ်ပုံ ရှုမျှော်ခင်းကလေးပေါ့ ...။
၁၆ အောင်စ အလေးချိန်ရှိတဲ့
“ဖိတ်စာ ... ပါ”
ငါ့အဆုတ်ကြီး ပြည့်ဖောင်းလို့ ...။
တသက်လုံး ငါ့မှာ ချစ်မှားယွင်းခဲ့
ဘဝတလျှောက်လုံးလောက် ချစ်မှားယွင်းသင့်တာပေါ့ ...။
ငါ့မိတ်ဆွေ ဖိနပ်ချုပ်သမားလေးရေ ...
သူကလေး စီးဖို့ပါကွယ် ...။
ငါ မင်းကို ရှာတယ်
“အင်ထရိုပီ” တွေ မြင့်ကုန်ရပါပြီကွယ် ...။
ဒါ ငါ မမျှော်လင့်ခဲ့ဘူး
ဒါ မျှော်လင့်လို့ မဟုတ်ခဲ့ဘူး
ငါ့မှာ အူတွေ အထပ်ထပ်ယားလို့ ...။
၁၅၀ဝ လေ ...။
တဝကြီး သင်းကလေးနဲ့ ...။
နပိုလီယံဟာ ကျဆုံးခဲ့တယ်မှုတ်လား ...။
ဘယ်ကောင် ယှဉ်ရဲသလဲ ...။
မင်းကလေးဟာ လမင်းအသစ်ပါကွယ် ...။
သည်ကောင် ရင်ခုန် မိုးလုံးပြည့်
ဒါ ငါ့ရင်ခွင်လေ ...။
ချစ်အခိုးတွေ အလိပ်လိုက် အလိပ်လိုက်
လူတွေဟာ အတော်ကြီးကို ခက်တယ်
အက်စစ်နဲ့ နှလုံးသားကို ပက်မှ
သင်းတို့ သိသွားစေရမယ် ...။
အချစ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အမြန်ထုတ်ပေးပါကွယ် ...။
မှတ်လိုက်ကြပါတော့ကွာ ...။ ။
Posted by linnzawhtike at 2/09/20140comments
သင့်မဟုတ်တာတွေလုပ်တတ်သလို ယုတ္တိမတန် အတ္တဆန်တဲ့
ဘယ်လိုပဲဖြစ်စေ ………. သူတို့ကိုခွင့်လွှတ်လိုက်ပါ။
သင်ကသနားကြင်နာတတ်ရင် လူတွေကသင်ဟာ တစ်ကိုယ်ကောင်းစိတ်ရှိသူ
ဘယ်လိုပဲဖြစ်စေ ……. သနားကြင်နာမြဲသနားကြင်နာပါ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်စေ ………. အောင်မြင်အောင်ဆက်ကြိုးစားပါ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်စေ ……… ရိုးသားဖြောင့်မတ်ပါ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်စေ ……. တည်ဆောက်မြဲတည်ဆောက်ပါ။
သူတို့ကမနာလိုဝန်တိုမှုတွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်စေ ……. စိတ်အေးချမ်းအောင်နေပါ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်စေ …… .ကောင်းတာကိုပဲဆက်လုပ်ပါ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်စေ ...… လောကကြီးကိုအကောင်းဆုံးပေးဆပ်မြဲပေးဆပ်ပါ။
သင်နဲ့ တရားသာ အတူရှိတော့တာပါ။
ငါ ၊မင်း ၊သူတစ်ပါးအကြားမှာ ဘာမှမရှိပါဘူး။
ရဲ့မိဘမဲ့ ဂေဟာ တစ်ခုတွင် ချိတ်ဆွဲ ထားသော ကဗျာ )
Posted by linnzawhtike at 1/13/20140comments